Arsène Wenger oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Barcelona inay la saxiixaneyso weeraryahan cusub – Gool FM
Arsène Wenger oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Barcelona inay la saxiixaneyso weeraryahan cusub
Dajiye June 12, 2020
(Yurub) 12 Juun 2020. Macalinkii hore kooxda kubadda cagta Arsenal ee Arsène Wenger ayaa sheegay in Barcelona ay la soo saxiixan doonto weeraryahan cusub, inkastoo ay ku sugan yihiin Luis Suarez iyo Antoine Griezmann.
Magaca weeraryahanka reer Argentina iyo kooxda Inter Milan ee Lautaro Martínez ayaa lala xiriirinayey inuu u dhaqaaqayo naadiga Barcelona laga bilaabo xilli ciyaareedka soo socda.
Madaxda kooxda Barcelona ayaa waxay aaminsan yihiin in Lautaro Martínez uu noqon doono badelka saxda ah Luis Suarez ee mustaqbalka fog, sidaas darteed weeraryahanka reer Argentina ayaa ah bar-tilmaameedka koowaad ee Blaugrana suuqa xagaaga ee soo socda.
Haddaba Arsène Wenger ayaa wareysi uu ku bixiyay “beIN SPORTS” wuxuu ku sheegay:
“Barcelona waxay xilli kasta soo iibsataa ciyaartoyda ugu fiican, laakiin ma hubo in Suarez lagu bedelayo weeraryahan kale”.
“Barcelona waxay soo iibsan kartaa weeraryahan kale, sababtoo ah Messi iyo Suarez waxay u baahan yihiin ciyaaryahan seddexaad oo goolal dhalin kara”.
“Waxaan wali aaminsanahay in Antoine Griezmann uu bilaabi doono inuu goolal dhaliyo, maadaama ay u muuqato inuusan wali la qabsan qaabka ay Barcelona u ciyaarto, bale laga yaabee in mudo ah kaddib ay xaalada is badeli doonto, isla markaana uu ku soo laaban doono inuu goolal dhaliyo”.
“Laakiin waxaan si buuxda ugu qanacsanahay inay Barcelona soo iibsan doonto weeraryahan kale”.
Eto'o oo sheegay xiddig gacan weyn ka geysan kara in Inter ay u dagaalanto ku guuleysiga horyaalka Talyaaniga
Ole Gunnar Solskjær oo lagu taliyey inuu ka dul qaado kooxda Real Madrid badelka Paul Pogba